Kubhubhe umndeni (13) engozini - Ilanga News
Home Izindaba Kubhubhe umndeni (13) engozini
Kubhubhe umndeni (13) engozini
UMnu Mndali uthi inkosikazi yakhe bekungathi ibisiyazi ukuthi izoshona
“INGIVALELISE kahle inkosikazi yami ingithengela izimpahla ezintsha zokugqoka engizobe ngizigqoke ngosuku lomngcwabo.
“Ingenzele isimanga into engajwayele ukuyenza, yangithengela amabhulukwe nezicathulo okusha, ngathi ibiyazi ukuthi isiyahamba emhlabeni.”
Usho kanje uMnu Thulani Mndali waseCentocow, emuva kwengozi yetekisi eyenzeke ngoMgqibelo ntambama, yadlula nemiphefumulo ewu-13 yamalungu omndeni wakhe.
Kulesi sigameko kushone inkosikazi kaMnu Mndali, uNkk Zotholani Mndali (61), uSandile Mndali (36), uMlekeleli Mndali (35) obeshayela, uNjabulo Mndali, uNobuhle Mndali, u-Enzokuhle Mndali (2), uNcame Mndali, uMzwelani Mndali, uNobuhle Mndali, uThabsile Dlamini obeyingoduso yendona yakhona noLindekile Dlamini naye obeyingoduso yendodana.
UMnu Mndali ongumnikazi wetekisi obekuhanjwa ngalo, uthi umndeni wakhe wehlelwa yileli shobolo nje, ubuphuma emzini kadadewabo kade kunomcimbi wokumgeza njengoba washonelwa ngumyeni.
Uthi imoto ibishayelwa yindodana yakhe, uMlekeleli kanti ingozi yenzeke besendleleni, beyokwetha uphethiloli.
“Sithole ukuthi kukhona okumphazamisile emgwaqweni, wazama ukuvika khona kanti imoto isizophaphalaza yaphuma yabalahla ngaphandle komgwaqo.
“Amadodana ami bengijwayele ukuwanika imoto ayishayele ngoba noma isebenza abeshitshana ngayo. Ngife olwembiza, wumndeni wami wonke oshonile ngisho nomakoti bamadodana ami amadala,” kusho uMnu Mndali.
Uthi nakuba yena uyaphila, usindiswe wukungayi emcimbini ngoba efuna ukugada imfuyo yakhe.
“Nami bengizoya emcimbini kwase kuphoqa ukuthi mangisale ngigade imfuyo, ngifuna nokuya emasimini. Ingivalelise kahle inkosikazi yami ekuseni ngabo-7 sebehamba, yaze yangithembisa ukuthi bazosheshe babuye, kanti ibingikhohlisa, ngeke ngisaphinde ngiyibone.
“Phakathi nesonto iye edolobheni eXobho, yabuya ingiphathele amabhulukwe amasha nezicathulo zokuhamba ngaze ngayibuza ukuthi kwenzenjani. Ingitshele ukuthi ifuna ngibe muhle phakathi kwabantu, ngibukeke njengamanye amadoda,” kusho yena.
UDkt Nkosazana Dlamini-Zuma nobuholi bukahulumeni wakwaZulu-Natal, obebuholwa ngundunankulu uMnu Sihle Zikalala, buvakashele umndeni wakwa-Mndali buyobhonga emswanini.
UDkt Dlamini-Zuma uthe lesi sigameko siqondane nokuthi ubefika eye eThekwini eyosebenza, wabe esezwa ukuthi ubuholi buzovela emndenini, wathi akasasali njengoba kuyindawo yangakubo lena.
Uthe uhulumeni uzosebenzisana nomndeni ukuwusiza ukuba welulekwe ngokomqondo. UMnu Zikalala uveze ukuthi bayazibophezela bewuhulumeni ukuthi bazobambisana namalungu omndeni ukuwasiza ngamalungiselelo omngcwabo.
Previous articleUtholakele “olahle” usana
Next articleMazinikwe ithuba “Izangoma Zodumo”